Budata AdwCleaner maka Windows
Free Budata maka Windows (7.80 MB)
AdwCleaner bụ nchekwa nchekwa dị ike ma dị elu nke na-echebe ndị ọrụ kọmputa pụọ ​​na ngwanrọ ọjọọ na-ekesa na ịntanetị. Ọ bụrụ na ịnweghị mmemme antivirus ọ bụla na kọmputa gị, ọ bara uru iji nyochaa kọmputa gị maka malware ọ bụla site na nyocha site na enyemaka nke AdwCleaner site noge ruo noge.
Ọ dị naka gị iji nọrọ na nchekwa na mmemme a, nke na-echebe gị megide mmemme nnọchi ụlọ, adware, malware, rootkits, virus, trojans, toolkits na ọtụtụ sọftụwia ọjọọ ndị ọzọ.
AdwCleaner, nke nwere interface dị mfe, dịkwa mfe iji ma ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile nwere ike iji ya rụọ ọrụ. Mmemme ahụ, nke na-enye gị atụmatụ niile o nwere notu ihuenyo ụlọ, na-enyocha ma depụta ngwanrọ niile dị njọ na kọmputa gị maka gị na ịpị otu pịa.
AdwCleaner, nke na-enye gị ezigbo ngwọta iji tufuo ngwanrọ nke ndị ọzọ na-agbanwe homepage na mgbakwunye na-agbanwe ntọala ihe nchọgharị gị, na-adọrọ uche dị ka otu nime mmemme nchedo nke kwesịrị na kọmputa gị.
A na-enye gị AdwCleaner, otu mmemme kachasị dị irè iji chebe kọmputa gị ma tufuo ngwanrọ na-emerụ ahụ kpam kpam nefu.
Nha faịlụ: 7.80 MB
Kacha ọhụrụ na: 07-07-2021